WordPress Plugin: PostPost (Nohavaozina) | Martech Zone
Alahady 18 Febroary 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
vaovao farany: Ity Plugin ity dia nafindra tao amin'ny pejin'ny Projects ary navaozina tamin'ny:
PostPost - Plugin WordPress hametrahana atiny namboarina alohan'ny sy aorian'ny lahatsoratra tsirairay ao amin'ny tranokalanao na ny sakafonao.
I wrote this plugin after trying to add advertising to my feed by myself and getting frustrated. It's my first ‘complete' plugin but I think it's written very cleanly. I really figured out the Plugin architecture utilizing Simple Thoughts' Copyright Plugin. Nampiasako ny fananganana Ryan Duff's WP Contact Form plugin to write it much more constructively. It's an excellent plugin to download and learn how to write a plugin since it's so simple.
17 Mey 2007 tamin'ny 2:26 hariva
Doug - Mahafinaritra izany. Niala tamin'ny nanoratako ny tenako aho tamin'ny fanantenan'ny olon-kafa hanao azy. Tsy manao doka aho, fa mikasa ny hanana feed fotsiny izay ho avy. Ho lavorary izany. Misaotra!
17 Mey 2007 tamin'ny 3:44 hariva
Misaotra Tony! Hamboariko io afaka roa herinandro ho avy miaraka amin'ny interface Admin. Vaovao aho amin'ny fanoratana Plugins ka miadana ny fandehany.
18 Mey 2007 tamin'ny 6:47 hariva
FYI fotsiny dia averiko soratana tanteraka ilay plugin ary navoakako indray. Tsara ny tany am-boalohany, saingy ny fanavaozana dia misy interface admin feno eo aminy! Naveriko koa ity lahatsoratra ity.
18 Mey 2007 tamin'ny 6:51 hariva
Cool. Somebody's dia nanana faran'ny herinandro nahafinaritra sy namokatra 😉
18 Mey 2007 tamin'ny 6:55 hariva
Izany tokoa! Iray amin'ireo tanjoko ho an'ny taona 2007 ny manoratra ny plugin-ko manokana avy eo am-boalohany. Efa nanova plugins an'ny hafa aho fa ity no voalohany noraisiko. Ampiasaina hanompoana ny Google Ads-ko isaky ny lahatsoratra tsirairay ary koa ny doka RSS Feed-ko.
Zavatra mahafinaritra… ary tanjona 2 latsaka! (Ny iray tamin'ireo hafa dia niditra an-tsokosoko tamin'ny Top 5,000 tao Technorati… Tonga dia nokapohiko io saingy niaraka tamin'ny fanampian'ny lahatsoratra “Z-List” marobe, ka hiandry ny antontan'isa hamoaka ny tenany alohan'ny hankalazako aho) .
18 Mey 2007 tamin'ny 7:20 hariva
DOH! Tsikaritro ihany koa fa niseho teo amin'ireo lahatsoratra pejy… ka dia novaiko fotsiny izy ary namoaka 1.1.1. Heveriko fa firaketana hafainganam-pandeha famoahana izany! Azonao atao koa ny manamboatra ny atiny alohan'ny sy aorian'ny pejy.
19 Mey 2007 tamin'ny 2:08 hariva
Misaotra noho izany, eritreritra haingana ho anao - mino aho fa nametraka fetra 4 (5?) Ny dokambarotra Google isaky ny pejy, ka raha manampy kaody AdSense ianao aorian'ny / alohan'ny lahatsoratra tsirairay, ary manana ny safidy napetraka mihoatra ny 5 ianao Lahatsoratra zahana isaky ny pejy, mety hisy olana ara-teorika.
Tsy natao ho fitarainana, satria tsy ampiasaiko intsony (najanona ny kaontiko:
19 Mey 2007 tamin'ny 5:58 hariva
Handinika an'io Chris io aho! Miezaka ny 'milalao' amin'ny hevitra kisendrasendra aho ary ny laharana faha-n'ireo. Ary koa, handeha hiasa amin'ny fanaingoana header sy footer aho. Voasoratra tsara ny plugin ('nindrana' rafitra hafa avy amin'ny plugins voasoratra tsara aho) ka hanohizako ny fanitarana azy.
20 Feb 2007 tamin'ny 12:47 maraina
OK, misaotra tamin'ny fampahalalana, ary ny valiny haingana, ankasitrahana.
20 Feb 2007 tamin'ny 8:51 maraina
Tsy azoko antoka hoe ahoana ny azy ireo Pejy politika tokony hampiharina. Voalaza ao fa mety hahatratra 2 ny doka isaky ny vokatra. Mahaliana izany… ohatra, Raha manana lahatsoratra 8 (vokatra) amin'ny pejy iray misy Google Ad eo ambaniny aho, dia tsy mino aho fa mandika ny politikan'izy ireo.
Nahita fitsipika taloha kokoa aho izay nanoratany 4 isaky ny pejy - saingy toa efa ela be ireo. Angamba noho ny toe-javatra toy izao. Interesting! Tsikaritro ihany koa fa indraindray doka tsy novokarin'ny script - Manontany tena aho raha manana rafitra fanaraha-maso anatiny natsangana izy ireo.
20 Mey 2007 tamin'ny 1:53 hariva
ah OK, ka nisy fampahalalana taloha tao an-tsaiko, misaotra tamin'ny fanitsiana.
Salama, miverina indray. Misaotra tamin'ny mailaka nataonao, miala tsiny fa elaela vao namaly.
Fangatahana iray, ary bibikely roa.
Mety ho any amin'ny lohahevitro ireo bibikely, tsy azoko antoka…
1 - Azo atao ve ny manova ny habetsaky ny doka ampidirina eo anelanelan'ny lahatsoratra - Tsapako fa be loatra ny doka ato amin'ny tranokalako:> Nieritreritra aho tamin'ny voalohany ny amin'ny mety hametrahana an'io amin'ny lahatsoratra hafahafa na isa aza, saingy tsapako avy eo ny nomeraon-kafatra tsy misy lahatsoratra mifamatotra dia tsy nampiasaina intsony tamin'ny WP. Ohatra, manoratra drafitra iray ianao, mandefa lahatsoratra vitsivitsy hafa, avy eo mamafa ny drafitra. Raha tsy misy antony hafa mahatonga ny lahatsoratro #s tsy hiaraka, dia hiafara amin'ny filaharana toy ny 431,433,434 ianao. Tsy azoko antoka hoe ho mora toy inona ny fampiharana karazana fisie POST_AD_POST_POST_AD_POST_POST, misy eritreritra?
2 - (IHANY) Rehefa mijery lahatsoratra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sokajy misy ahy, matetika ny kaody doka dia tsy adika - toa miseho amin'ny lahatsoratra fohy fotsiny izany. Ohatra, raha mankany amin'ny tranokalako ianao ary tsindrio ny sokajy Sary, ireo lahatsoratra telo voalohany dia mampiseho ny kaody fa tsy ny vokatra.
3 - Toa tsy mandeha izy rehefa mangataka doka amin'ny fizarana footer.
Toy ny nolazaiko, ireo olana ireo dia mety hidina amin'ny lohahevitra ampiasaiko (Anaconda, zahao ny tranokalanay raha te hanana rohy), nanantena fotsiny aho fa hahazo ny hevitrao momba izany rehefa mahazo fotoana fohy…
Apr 12, 2007 amin'ny 12: 13 AM
Tsy maintsy nesoriko ny doka isaky ny paositra, satria mpamaky maromaro no naneho hevitra momba ny fisehoan'ireo lahatsoratra fohy raha jerena amin'ny alàlan'ny rohy sokajy.
Raha sendra mahita 5/10 minitra fanampiny ianao, afaka mifandray amiko ve ianao, ary ampidiriko am-pifaliana ilay kaody, raha tianao ny mamantatra ilay olana.
May 29, 2007 amin'ny 3: 52 AM
Ataoko angamba fa tsy voamarina matetika ity lahatsoratra ity?
Nanandrana nanamarina ny pejin'ny tetik'asa aho, saingy tsy nahita fizarana fanehoan-kevitra, ka nandefa anao tany amin'ny mailaka kelikely.
Tsy manao doka sahala amin'izany aho izao, saingy manontany tena raha toa ka mbola hitan'ireo mpampiasa hafa fa mahasoa ireo fiasa nolazaiko tetsy ambony.
May 29, 2007 amin'ny 7: 54 AM
Ooops! Miala tsiny, Chris! Nisy antony tsy nahitako an'io fanehoan-kevitra io. Manana fanatsarana marobe izay tiako hatao amin'ilay tetikasa aho, mila manatona azy ireo fotsiny aho!
May 29, 2007 amin'ny 11: 36 AM
np, faly nahita ny hevitrao. Nahazo ilay mailaka milazalaza ny amin'ny pejy sokajy ve ianao, indraindray dia natao ny doka nefa tsy nadika? Tsy azoko antoka raha toa ka izany no fomba tokony hamaritanao azy ara-teknika, fa tsy dokam-barotra akory dia ny html no hitako tamin'io…
Tsy maika ny mangataka avy amiko - mihodinkodina amin'ny zavatra hafa aho izao…
5 Jan 2008 amin'ny 3:13 PM
Navoaka PostPost 1.2.0 androany! Izy io dia mampiasa ny fiasan'ny is_single an'ny WordPress ka tokony hahafahanao mandefa zavatra alohan'ny na aorian'ny pejy iray.
Toa tsy vitako ny miasa ao amin'ny bilaogiko, na izany aza. Mamaky amin'ny fanohanana WordPress aho fa misy olon-kafa manana olana amin'ny môdely sy ny fiasa is_single. Tsy manapotika na inona na inona izany, tsy mampiseho zavatra fotsiny.
Ampahafantaro ahy raha mety amin'ny bilaoginao izany, na izany aza!
Mar 25, 2008 amin'ny 6: 57 AM
Tsy (mampiasa ny lohahevitra Big Blue aho). Misy vintana hamahana izany? 🙂
Dec 10, 2008 ao amin'ny 3: PM PM
Doug: plug-in mahafinaritra - fohy sy tsotra. Mampiasa ny lohahevitra WordPress default (v 1.6) aho ary toa tsy mampiseho na inona na inona ny safidy "After Single Post on Page".
Efa namaha ny olan'ny is_single ve ianao?
Tongasoa, Dr. Jim!
Tsy mbola hitako ny is_single olana namboarin'i WordPress amin'izao fotoana izao. Haka maka indroa amin'ny kaody aho, saingy azoko antoka fa tsy maninona ny plugin.
Dec 10, 2008 ao amin'ny 10: PM PM
Doug: misaotra tamin'ny valiny haingana! Noho izany, inoako fa nanao asa tsy dia tsara aho tamin'ny fametrahana ny fanontaniako. Toa manana olana vitsivitsy aho amin'ny fomba fiasan'ny PostPost amin'ny bilaogiko manokana amin'ilay safidy fampisehoana tokana.
Tsy hoe tena zava-dehibe izany, fa ny bilaogiko dia:
Toa anao sy ny mpaneho hevitra iray (teny iray ve izany?) Niresaka momba io olana io tamin'ny fiandohan'ny taona 2008.
Nisy olana ve taloha? Ny? Taorian'ny Lahatsoratra Iray tamin'ny pejy? miasa amin'ny bilaoginao anio?
Vonona ny hanaiky aho fa nanodinkodina zavatra iray, fa kosa aloha mijery fotsiny aho sao misy olon-kafa manana olana mitovy.
Nojereko ny kaodinao ary tsara sy madio izy io, ka amin'izao fotoana izao dia manome tsiny ny “is_single” aho.
Avelao aho hanazava ny hevitrao.
Dec 17, 2008 amin'ny 9: 19 AM
Miezaka ny mametraka plugin PostPost aho ary miasa tsara izany. Mametraka fampiroboroboana aho isaky ny lahatsoratra tsirairay, saingy manana olana aho. Ny fampiroboroboana dia aseho amin'ny sokajy / pejy fandraisam-bahiny izay nitahirizako ny marika bebe kokoa. Ny fampiroboroboana dia miseho aorian'ny rohy READ MORE. Misy fomba ahafahantsika manamboatra izany ve? Tsy aseho aorian'ny READ MORE MORE ??